हर्पेस उपचार र औषधि | एकलकेयर - स्वास्थ्य शिक्षा | अगस्ट 2021
कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कल्याण समाचार, कल्याण समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर प्रेस समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी समाचार कम्पनी, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> हर्पेस उपचार र औषधि
हर्पेस उपचार र औषधि
हर्पेस के हो? | हरपीज निदान | हरपीज उपचार विकल्पहरू | हर्पेस औषधिहरू | सर्वश्रेष्ठ हर्पेस औषधिहरू | हर्पेसको साइड इफेक्ट | हरपीज घरेलु उपचार | FAQ
यसको सामना गरौं, हर्पेस एउटा संवेदनशील विषय हो। यसले स्वास्थ्य कक्षामा सातौं तहको जताततै तिनीहरूको नर्वस गिगल्सलाई दिक्क पार्नका लागि बनाउँदछ। तपाईं बस आफ्नो सिट मा बदल्दै हुनुहुन्छ बस यो पढेर। यद्यपि हाम्रो दिमाग अक्सर यौन गतिविधिको परिणामको रूपमा जननांग हर्पेसमा जान्छ, हर्पेस सिम्प्लेक्स भाइरस (HSV) त्यो भन्दा अलि बढी विविध छ। र हर्पेस प्राय: निजी राखिएकोले यसको मतलब यो दुर्लभ हुन्छ। हरेक वर्ष लाखौं अमेरिकीहरू यसको लागि उपचार खोज्छन्। भाग्यवस, हामी हर्पेसको बारेमा संवेदनशील प्रश्नहरूको उत्तर दिन यहाँ छौं। हर्पेस र यसका विभिन्न उपचारहरूको बारेमा सबै महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि पढ्नुहोस्।
हर्पेस के हो?
हर्पेस एक साधारण र संक्रामक संक्रमण हो जुन हर्पेस सिम्प्लेक्स भाइरस (HSV) को कारणले हुन्छ। संक्रमित क्षेत्रको साथ छालाबाट छाला सम्पर्क द्वारा फैलियो, यो सामान्यतया मुख र / वा बाह्य जननेंद्रिया वरिपरि घाउ वा छालाको रूपमा प्रकट हुन्छ। अन्य हर्पेस लक्षणहरूमा खुजली, ज्वरो, चिसो, शरीर दुखाइ, र दर्दनाक वा गाह्रो पेशाब समावेश हुन सक्छ।
त्यहाँ हर्पेस दुई प्रकारका हुन्छन्। HSV-1 धेरै अधिक सामान्य र अक्सर कम गम्भीर छ। को विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान त्यो विश्वव्यापी billion.7 अरब मानिस HSV-1, लगभग आधा विश्व जनसंख्या छ। यसलाई प्रायः मौखिक हर्पेस भनिन्छ किनभने यो मुखको वरिपरि देखा पर्दछ, जस्तो देखिन्छ चिसो घाउ यद्यपि धेरै केसहरू एसिम्प्टोमेटिक हुन्। यो हर्पेस सिम्प्लेक्स भाइरस प्रकार मौखिक-देखि-मौखिक वा मौखिक-देखि-जननांग सम्पर्क द्वारा प्रसारित गर्न सकिन्छ, कुनै सक्रिय घावहरू नभए पनि। कहिलेकाँही, संक्रमित व्यक्तिसँग टुथब्रश वा भाँडाहरू साझेदारी गर्दा पनि प्रसारण हुन सक्छ।
नियमित रगतमा चिनीको स्तर के हो
HSV-2, जननांग हर्पेस, एक यौन संचारित रोग हो र (जस्तो कि नामले सुझाव दिन्छ) मुख्यतः जननेंद्रिय क्षेत्रलाई असर गर्दछ। HSV-1 जस्तै, HSV-2 धेरै हल्का लक्षणहरू देखाउन सक्छ वा कुनै लक्षणहरू छैन। तर यसले जननेन्द्रिय र मलाशयमा छाला र अल्सरको पनि कारण निम्त्याउँछ। यसबाहेक, एचएसभी २ का व्यक्तिहरूले फ्लू जस्तो लक्षणहरू पनि अनुभव गर्न सक्दछन्, विशेष गरी ज्वरो, चिसो, र शरीर दुखाइ।
दुबै प्रकारको HSV संक्रमण आजीवन र असाध्य छ। यसको मतलब यो होइन लगातार स्थिर आवर्तीकरणहरू, यद्यपि। व्यक्ति लामो प्रकोप जान सक्छ, साल सम्म, प्रकोप वा लक्षण बिना। यो हर्पेस यति प्रबल हुनुको एक कारण हो। एक अनुसार सीडीसी तथ्य पाना , १6देखि ages ages वर्ष उमेरका प्रत्येक Americans अमेरिकी मध्ये १ जनामा ​​जननेन्द्रिय हर्पिस रहेको छ, र अनुमानित 87 87.।% उनीहरूले कहिले पनि क्लिनिकल निदान प्राप्त गर्दैन।
हर्पेस कसरी निदान गरिन्छ?
हर्पेस भाइरस प्राय: जसो यौन संभोग, मौखिक सेक्स, वा चुम्बनको माध्यमबाट फैलिन्छ। यद्यपि कहिलेकाँही HSV-1 साझा लिप बाम, भाँडा, वा अन्य थार मार्फत फैलिन सक्छ जुन लारको सम्पर्कमा आउछ।
धेरै जसो अवस्थाहरूमा, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले हर्पेसलाई एक दृश्य परीक्षणको साथ र विभिन्न लक्षणहरू छलफल गरेर निदान गर्न सक्छन्। यदि त्यहाँ कुनै शंका छ भने, तिनीहरूले पनी एक भाइरल संस्कृति लिन को लागी लिन सक्दछ, जसमा एक स्वाब वा स्क्र्यापको प्रयोगशाला विश्लेषण सामेल छ।
यदि बिरामीलाई हर्पेस सिम्प्लेक्सको कुनै इतिहास छैन र नयाँ बिरामी हो भने, म सधैं भाइरल संस्कृति गर्दछु, भन्छन मेरी हयाग , एमडी, एक बोर्ड प्रमाणित त्वचा विशेषज्ञ र 5th औं एवेन्यू सौंदर्यशास्त्र को संस्थापक। साथै, यदि म HSV-2 को बारे मा संदिग्ध छ वा यो एक प्रतिरोधक रोगी हो भने, म एक भाइरल संस्कृति आदेश हुनेछ। परिणामहरू फिर्ता आउनु अघि नै मैले तत्काल नै उपचार थाल्छु। यी परिणामहरूलाई एक हप्ता लाग्न सक्छ र चाँडै उपचार सुरू गर्नु उत्तम हुन्छ।
तर फेरि, लक्षणहरू जहिले पनि प्रस्तुत हुँदैनन्। भाग्यवस, रगत परीक्षणको साथ HSV निदान गर्न पनि सम्भव छ। तपाईको शरीरले भाइरससँग लड्न एन्टिबडीहरू उत्पादन गर्दछ, र चिकित्सकहरूले र doctors्ग नमूना प्रयोग गरेर हर्पेस सिम्प्लेक्स भाइरससँग लड्ने विशिष्ट एन्टिबडीहरू पत्ता लगाउन सक्छन्।
एक प्राथमिक हेरचाह चिकित्सकले सटीक निदानको लागि आवश्यक परीक्षणहरू र परीक्षणहरू गर्न सक्दछ। यद्यपि, यौन स्वास्थ्य क्लिनिकहरूले समान, भरपर्दो सेवाहरू प्रस्ताव गर्दछ।
हरपीज उपचार विकल्पहरू
दुर्भाग्यवस, हर्पेस एक स्थायी रोग हो र यसको कुनै उपचार छैन, त्यसैले जो कोहीसँग यो छ, त्यो जीवनको लागि हो। चाँदीको अस्तर के हो भने धेरैले कम समय र गम्भीर लक्षणहरूसँग समयको साथ अनुभव गरिरहेको रिपोर्ट गर्छन्, कहिलेकाँही यसले वर्षौं बित्दै जान्छ।
तर यसको मतलब यो होइन कि हर्पेस सिम्प्लेक्स भाइरस संक्रमण भएका व्यक्तिहरूले केवल यसमा हाँसे र सहन गर्नु पर्छ। त्यहाँ यसको लक्षणहरू प्रबन्ध गर्ने तरिकाहरू छन्। सब भन्दा सामान्य (र प्रभावी) प्रिस्क्रिप्शन एन्टिवाइरल्स हो। यी सामान्यतया दुई मध्ये एउटा तरिकामा काम गर्दछन्: एपिसोडिक थेरापी वा दमन चिकित्सा।
एपिसोडिक थेरापी प्रत्येक उद्रेकको जस्तो व्यवहार हुन्छ। बिरामीले प्रकोपको पहिलो संकेतबाट एन्टिवाइरल थेरापी शुरू गर्दछ र एपिसोडको समयसीमा छोटो बनाउँदै धेरै दिनसम्म यसलाई लिन जारी राख्छ। यसले कम बारम्बार प्रकोप हुने व्यक्तिहरूको लागि आदर्श बनाउँदछ। अर्कोतर्फ दमनकारी थेरापी बिरामीहरूको लागि बारम्बार हुने प्रकोपको सिकार हुन्छ। यसमा एन्टीवायरल औषधिको दैनिक खुराक लिनु समावेश छ एचएसभी लक्षणहरू खाडीमा राख्न र एपिसोडको सम्भावना कम गर्न। यी कुनै पनि प्रकारका प्रकारले यौन साथीहरूलाई प्रसारण गर्न रोक्दैन, यद्यपि।
चाहे यो बिरामीको पहिलो एपिसोड हो वा उनीहरूको १० औं, यो औषधि सुरू गर्नु उत्तम हुन्छ प्रकोपको पहिलो चिन्हमा। डा। मायाग भन्छिन्, तपाईलाई रसपसी वा बम्पहरू उपचारको लागि देखा पर्न पर्दैन। तपाईं जति चाँडो सुरु गर्नुहुन्छ, राम्रो छ। औषधीहरूले यसलाई तुरून्त रोक्दैन, तर तिनीहरू संक्रमणको लम्बाई र भाइरल भार कम हुनेछ।
HSV संक्रमणको साथ जो कोहीले अधिक-काउन्टर क्रीम र लोशनबाट टाढा रहनु पर्छ। संक्रमित क्षेत्र सफा र सुक्खा राख्नु आवश्यक छ, र क्रिमहरूले उपचार प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ।
यद्यपि हर्पेस सिम्प्लेक्स भाइरसको कुनै उपचार छैन, एन्टिवाइरलहरूले यसको फैलिनमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ, र पीडा कम गर्नेहरूले यसको लक्षणहरू प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ।
एन्टिवाइरल उपचार वास्तवमा केवल औषधीको एक मात्र प्रकारको औषधी हो जुन हर्पेस भाइरसमा प्रत्यक्ष कार्य गर्दछ। यसले रोगलाई निको पार्दैन, तर यसले भाइरल प्रजनन रोक्न मद्दत गर्दछ, सम्भाव्य रूपमा प्रकोप दबाउन र हर्पेस लक्षणहरूलाई शान्त पार्न। भाइरसको प्रजनन संयन्त्रको साथ हस्तक्षेप गरेर, एन्टिवाइरल्सहरूले स्वस्थ कोषहरूमा फैलिनबाट रोक्छ। यी औषधीहरूले कुनै पनि प्रकारका एचएसभीको लागि काम गर्दछन् र डाक्टरहरूले प्राय: बिरामीहरूलाई तिनीहरूको पहिलो प्रकोप अनुभव गर्ने सल्लाह दिन्छन्। तीन प्रायः निर्धारित मौखिक औषधिहरू हुन् Valacyclovir, Acyclovir , र Famciclovir भन्छन् केनेथ मार्क , एमडी, एक सौंदर्य प्रसाधन त्वचा रोग विशेषज्ञ र त्वचा विज्ञान विभाग NYU मा क्लिनिकल सहायक प्रोफेसर। अर्को लोकप्रिय छनोट Abreva हो, सामयिक मलहम मुख्य रूप HSV-1 उपचार को लागी।
benadryl एलर्जी benadryl जस्तै छ
Nonsteroidal एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs)
ओभर-द-काउन्टर दुखाइ राहत गर्नेहरू जस्तै आईबुप्रोफेन र एसिटामिनोफेनले रोग आफैंमा उपचार गर्दैनन्, न त उनीहरूले यसको प्रसारलाई रोक्छन्। जे होस्, तिनीहरूले हर्पेसका लक्षणहरूसँग सम्बन्धित कुनै पनि पीडा वा असुविधा कम गर्न सक्छन्। NSAIDs सम्भावित Valtrex र Zovirax जस्तै एन्टीवायरल ड्रग्स संग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन्, त्यसैले दुई प्रकारका औषधि एक साथ लिनु हुँदैन।
हर्पेसका लागि उत्तम औषधी के हो?
एक विशेष औषधि को प्रभावकारिता व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ, त्यसैले कुनै एकल सबै भन्दा राम्रो दाग उपचार छैन। डाक्टरहरूले प्रत्येक बिरामीको अवस्था, मेडिकल ईतिहास र वर्तमान औषधीहरूको लागि सबैभन्दा उपयुक्त औषधि लेख्छन्। त्योले भन्यो, यहाँ केहि औषधिहरू छन् जुन प्राय जसो HSV लाई उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ:
हर्पेसका लागि उत्तम औषधी
औषधि नाम औषधि वर्ग प्रशासन मार्ग मानक खुराक सामान्य साइड इफेक्टहरू
Valtrex (valacyclovir) एन्टिवाइरल्स मौखिक १,००० मिलीग्राम दिनको दुई पटक twice-१० दिनको लागि लिन्छ टाउको दुखाइ, मतली, पेट दुख्ने
फेमविर (परिवारिक) एन्टिवाइरल्स मौखिक Mg०० मिलीग्राम दिनमा। पटक टाउको दुखाइ, मतली, पखाला
Zovirax (acyclovir) एन्टिवाइरल्स मौखिक २००--4०० मिलिग्राम to देखि times पटकसम्म days दिन वा १२ महिनासम्म (प्रकोप फ्रिक्वेन्सीमा निर्भर) मतली, बान्ता, पखाला
अब्रेवा (डोकोसानोल) एन्टिवाइरल्स सामयिक प्रभावित क्षेत्रमा पातलो तहको रूपमा लागू गरियो खुजली, दाग, रातो
खुराक तपाईंको चिकित्सक द्वारा तपाइँको चिकित्सा अवस्था, उपचार को लागी प्रतिक्रिया, उमेर, र वजन को आधार मा निर्धारित गरीन्छ। अन्य सम्भावित साइड इफेक्टहरू अवस्थित छन्।
हर्पेस औषधिहरूको सामान्य साइड इफेक्टहरू के के हुन्?
Valtrex, Famvir, वा Zovirax मुखले लिदा, बिरामीहरूले अनुभव गर्न सक्छन्:
Zovirax वा Abreva को सामयिक संस्करण को लागी, सामान्य साइड इफेक्टहरु:
यसले सम्भावित साइड इफेक्टको पूर्ण स्कोप समेट्दैन, केवल सब भन्दा साधारण। यी औषधीहरू मध्ये कुनैको उपचारको लागि विचार गर्ने जो कोही पनि एक व्यापक विस्तृत सूचीको लागि एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर संग कुरा गर्नु पर्छ।
हर्पेसका लागि उत्तम प्राकृतिक उपचारहरू के के हुन्?
हर्पेस प्रकोपको अनुभव गर्दा, कुनै व्यक्तिले गर्न सक्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको क्षेत्र सफा, चिसो र सुक्खा राख्नु हो, किनभने तातो र चिसोपनले घाउहरूलाई दिक्क पार्न सक्छ। डा। हायागका अनुसार स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली कायम राख्न धेरै लामो यात्रा गर्न सक्दछन्। एक मजबूत, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणालीले हर्पेसलाई नियन्त्रणमा राख्न, प्रकोप रोक्न, र लक्षणहरूको अवधि घटाउन सक्छ, उनी भन्छिन्। जिंक, भिटामिन सी, र इचिनासिया जस्ता पूरकहरू तपाईंको प्रतिरोधक क्षमता बढाउन र तपाईंको दैनिक तालिकामा समावेश गर्न सजिलो हुन्छ। र जब यो प्राकृतिक उपचारको कुरा आउँदछ, त्यहाँ धेरै छन् धेरै धेरै राहत प्रदान गर्न सक्छन्।
Lysine। जब ठूलो मात्रामा लिन्छ (mg०० मिलीग्रामदेखि 000००० मिलीग्राम एक दिन), यस अमीनो एसिड केहि प्रभावकारिता देखाइएको छ प्रकोपको गंभीरता र फ्रिक्वेन्सी कम गर्नमा, तर त्यहाँ कुनै विस्तृत डाटा उपलब्ध छैन।
भिटामिन सी। तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई समर्थन गरेर, भिटामिन सी सम्भाव्य रूपमा चिकित्सा र कम बारम्बार प्रकोपहरूलाई बढावा दिन सक्छ।
जिंक छ केही आश्वासन देखायो HSV-2 प्रकोप विरुद्ध रक्षा मा।
प्रोबायोटिक्स। यो अध्ययन संकेत गर्दछ कि प्रोबायोटिक्स HSV-1 प्रकोप विरुद्ध लड्न प्रभावकारी हुन सक्छ।
लाइकोरिस रूट एक्स्ट्र्याक्ट। जब एक्वाफर वा भ्यासलिनसँग मिलाईएको र प्रभावित क्षेत्रहरूमा लागू गरियो, यस लाइसेरीसको एन्टिभाइरल गुणहरूले प्रकोप समावेश गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
निम्बू बाम तेल। प्रकोपको पहिलो चिन्हमा यो तेल लागू गर्दै प्रभावकारिता देखाईएको छ प्रकोपको तीव्रता कम गर्न, विशेष गरी चिसो घाउमा।
मानुका मह। हर्पेस घावहरूमा यो सिधा लागू हुन्छ तिनीहरूको प्रसार र गम्भीरतालाई रोक्न सक्छ ।
लसुन किनकि यसमा एन्टिमाइक्रोबियल र एन्टिवाइरल गुणहरू छन्, टॉपिक रूपमा लागू गरिएको लसुन सम्भावित हर्पेस प्रकोपहरू विरुद्ध लड्न मद्दत गर्दछ।
चिसो संकुचन। यी मुख्यतया एक प्रकोपको बेला असुविधा र सूजन कम गर्न सहयोग गर्दछ।
हर्पेसको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
के हर्पेस निको पार्न सकिन्छ?
दुर्भाग्यवस, होईन। एक पटक कसैले मौखिक वा जननेद्रीय हर्पेस करार गरे, तिनीहरूसँग यो जीवनको लागि हो। ड्रग्स र प्राकृतिक उपचारहरू, यद्यपि, लक्षणहरू प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ, र धेरै जसो केसहरू पूर्ण रूपमा एसिम्प्टोमेटिक हुन्छन्।
हर्पेस दुख्ने जस्तो देखिन्छ?
हर्पेसको प्रकोप अक्सर स्पष्ट फ्लुइडले भरिएका साना छालाहरूको समूहको रूपमा प्रकट हुन्छ। जब यी छालाहरू टुक्रिन्छन्, तिनीहरू सानो खुला घाउहरू बनाउँछन् जुन अन्तत: खोपिन्छ।
कसरी मानिसहरूले हर्पेस पाउने?
हर्पेस मुख्यतया संक्रमित व्यक्तिसँग असुरक्षित यौन सम्पर्कको माध्यमबाट संकुचित हुन्छ, जेनेनेटि-टु-जननांग, मौखिक-देखि-मौखिक, वा मौखिक-देखि-जननांग।
म घरमा हर्पेस कसरी उपचार गर्न सक्छु?
केहि आहार पूरकहरू जस्तै लाइसाइन, भिटामिन सी, जिंक, र प्रोबायोटिक्सले तपाईको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ र प्रकोप रोक्न वा छोटो बनाउन मद्दत गर्दछ। एक पटक प्रकोप सुरु भएपछि, चिसो कम्प्रेसनहरू, लाईकोरिस रूट एक्स्ट्र्याक्ट, निम्बू बाम तेल, मनुका मह, वा लसुन लागू गर्नाले यसको गम्भीरतालाई कम गर्न र लक्षण राहत प्रदान गर्दछ।
हर्पेस घाउलाई चाँडो निको पार्न कुन कुराले मद्दत गर्दछ?
घाउहरूलाई सफा, चिसो र सुक्खा राख्नु उपचार प्रक्रियाको लागि लाभदायक छ। ब्यान्डिजिंग, तताउने, वा घाउमा टिप्नेले उनीहरूलाई रिस उठाउछ र तिनीहरूको अवधि बढाउन सक्छ। हर्पेसको प्रकोप छोटो बनाउनको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी विधि भनेको प्रिस्क्रिप्शन एन्टिवाइरल औषधि हो जस्तै भ्यालासिक्लोभिर, फ्याल्डिक्लोभेर, वा एसायक्लोभिर।
हर्पेस औषधी कत्तिको प्रभावकारी छ?
एन्टिवाइरल हर्पेस औषधीले मौखिक वा जननेद्रीय हर्पेस संक्रमणको उपचार गर्दैन। यद्यपि दमनकारी थेरापीले यसको लक्षणहरूलाई महत्त्वपूर्ण रूपले मिसाउँछ। को रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू निर्धारित गरीयो कि यस उपचारले जननेद्रीय हर्पेस प्रकोपहरूलाई बिरामीहरूमा %०% -80०% ले घटाउन सक्छ जुन उनीहरूलाई बारम्बार अनुभव गर्दछन्।
के त्यहाँ हर्पेसको लागि ओभर-द-काउन्टर औषधी छ?
हो, तर ओटीसी औषधीहरू सामान्यतया प्रिस्क्रिप्सनहरू भन्दा हर्पेसको उपचारमा कम प्रभावकारी हुन्छन्। Abreva एक over-the-the काउंटर सामयिक औषधि हो जुन धेरै व्यक्ति HSV-1 बाट चिसो घाउको उपचार गर्न प्रयोग गर्दछन्, तर HSV-2 होइन। आईबुप्रोफेन र टाइलनोल जस्ता एनएसएआईडीहरू ओटीसी ड्रगहरू हुन् जसले दुखाइ र असुविधा कम गर्दछ, तर तिनीहरू हर्पेसलाई सीधा उपचार गर्दैनन्।
मौसमी एलर्जीको उपचार गर्ने ways तरिकाहरू
फ्लुको लागि संक्रामक अवधि कति लामो हुन्छ
डेपो जन्म नियन्त्रण शट कति सहि छ
के म पिए पछि आइबुप्रोफेन लिन ठीक छ?
मधुमेह को लागी ग्लूकोज दायरा के हो
कस्तो प्रकारको भिटामिन डी लिने
खतरनाक रगतमा चिनीको स्तर के हो